Advection: यो के हो, परिभाषा र यस घटनाको बारेमा उदाहरणहरू नेटवर्क मौसम विज्ञान
मौसम विज्ञानमा यो हुन्छ कि पूर्वानुमान गर्न वास्तविक समयमा वातावरणबाट हुने शारीरिक परिवर्तनहरू अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। वातावरण यो एक त्यस्तो माध्यम हो जहाँ जन आन्दोलनहरू सजीलै हुने गर्दछ। यस तरिकाले, ठाडो र तेर्सो चालहरू द्वारा ताप विनिमयको अनुमति छ। हावाले अन्य भौतिक मात्राको तापको तेर्सो यातायातलाई एड्भेभन भनिन्छ। Advection यो लेखको लक्ष्य हो।
मौसम परिवर्तन र मौसममा परिवर्तनहरू थाहा पाउन हामी वायुमण्डलमा अवस्थित Advection जान्ने महत्त्वको विश्लेषण गर्नेछौं। के तपाइँ यस बारे अधिक जान्न चाहानुहुन्छ? तपाईंले भर्खर पढिरहनु पर्छ 🙂
1 Advection के हो?
2 Advection विशेषताहरु
3 सघनताका कारणहरू
4 एडियाब्याटिक कूलि।
5 तापमानमा परिवर्तन advection को कारण
Advection के हो?
मौसम विज्ञानमा यो ठाडो चालहरु नामित गर्न कन्भरेक्शन शब्द प्रयोग गर्न धेरै सामान्य छ। यी आन्दोलनको गतिको मान सामान्यतया अधिक हुँदैन तेर्सो आन्दोलनको एक सयौं सम्म। तसर्थ, यो अवलोकन गर्न सकिन्छ कि ठाडो रूपमा विकास गर्ने बादलहरू बिस्तारै गठन भएको छ र पूरा दिन लिनको लागि सक्षम छ।
वायु जनको तेर्सो आन्दोलन विश्वभरि ठूलो पैमानेमा हुन्छ। यो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रहरूबाट ध्रुवीय क्षेत्रहरूमा ताप ऊर्जा सार्ने एक हो। तिनीहरू हजारौं किलोमिटर टाढा यात्रा गर्दै, विश्वको एक पक्षबाट अर्कोमा ऊर्जा पार गर्न सक्षम छन्। यो क्षैतिज यातायात हो कि advection छ र ठाडो एयर प्रवाहहरु भन्दा धेरै महत्वपूर्ण र स्थिर छ।
मौसम विज्ञान र भौतिक समुद्र विज्ञान मा, advection अक्सर उल्लेख छ वायुमण्डल वा समुद्रको केही सम्पत्ती को ढुवानी गर्न, जस्तै गर्मी, आर्द्रता वा लवणता। मौसमविज्ञान वा समुद्रशास्त्रीय विज्ञापनले isobaric सतहहरू पछ्याउँदछ र त्यसैले मुख्य रूपमा तेर्सो हो। यो हावाबाट वायुमण्डलीय सम्पत्तीको ढुवानीको पर्यायवाची हो।
यस अवधारणालाई अझ राम्रोसँग बुझ्न हामी दुवै तातो र चिसो विज्ञापनका केही उदाहरणहरू राख्नेछौं। न्यानो advection त्यो गर्मी छ कि हावाले अर्को ठाउँमा लगिन्छ। यसको विपरित, चिसो advection चिसो अन्य ठाउँमा ढुवानी हुन्छ। यद्यपि दुबै ऊर्जा ट्रान्सपोर्ट हो किनकि हावा कम तापक्रममा छ, यसमा अझै ऊर्जा छ।
मौसम पूर्वानुमानमा, विज्ञापन अवधिले वायुको क्षैतिज घटक द्वारा दिएको परिमाणको यातायातलाई बुझाउँछ। यदि हामीसँग चिसो विज्ञापन छ भने, यो तातो सतह तिर जान्छ। जब त्यहाँ न्यानो advection छ, यो चिसो माटो र समुद्र मा हुन्छ र तलबाट शीतलन हुन्छ।
त्यहाँ पानी वाष्प संक्षेपण को धेरै प्रकारहरु छन्। पहिलो विकिरण द्वारा छ र दोस्रो advection द्वारा। पानीको बाफलाई पनि एयर पब्लिक मिक्स गरेर र एडिएब्याटिक विस्तार द्वारा चिसो गर्न सकीन्छ। पछिल्लो सबैभन्दा ठूलो क्लाउड मास संरचनाहरूको कारण हो।
विज्ञापन कूलि Inमा, एक चिसो र आर्द्र हावा द्रव्यलाई तेर्सो रूपमा ढुवानी गरिन्छ, कूलर सतह वा एयर मास माथि थपेको छ।। तातो र चिसो आटा बीचको सम्पर्कको कारण, न्यानो आटाको हावाको तापक्रम चिसोसँग मिल्छ। यस प्रकारले बादल छाने बन्न थाल्छ, जबसम्म तातो द्रव्यमानको तापक्रम घट्ने शीत बिन्दुमा पुग्छ र पानीले संतृप्त हुन्छ।
रेडिएसन कूलि place हुन्छ जब पृथ्वी घामले चल्दछ। सतहको नजिकको तह परिणामको रूपमा ताप्न थाल्छ। यस कारणका लागि, तातो हावा बुलबुले बनेको छ र यसको कम घनत्वको कारणले, यो माथि बढ्दछ जब सम्म यो उच्च र चिसो तहहरू पूरा गर्दैन। जब उनीहरू उच्च तहमा पुग्छन्, तापक्रम ड्रप गर्न थाल्छ र तिनीहरू सन्तुष्ट, गाढा र क्लाउडको गठन हुन्छन्।
यो तापमानमा परिवर्तनको कारण हो वायुमण्डलीय चापमा कमीको कारणले जब उचाईमा माथि चढिन्छ। धेरै ठाडो प्रवाहहरूले यस चिसोलाई परिवर्तन गर्न सक्दछन्, साथै वातावरणीय थर्मल ग्रेडिएन्ट पनि कहलाइन्छ।
जब हावा बढ्छ, वायुमण्डलीय चाप कम हुन्छ। यस कारणले गर्दा, अणुहरूको चाल र फ्रिक्शन पनि घट्छ, त्यसैले हावा चिसो हुन्छ। सामान्य जस्तो, यो प्राय: kilome. degrees डिग्री उचाइको प्रत्येक किलोमिटरको लागि झर्छ।
यदि हावा सुख्खा छ भने तापक्रम ड्रप धेरै बढी हुन्छ (उचाइमा प्रत्येक किलोमिटरको लागि १० डिग्री)। यसको विपरित, यदि हावा संतृप्त छ भने, यसको तल झर्नेछ प्रति किलोमीटर मात्र degrees डिग्री।
बादलहरू पानी, हिउँ, वा दुबैको मिश्रणको धेरै सानो र सानो कणहरूको सेटले बनेको हुन्छ। ती वायुमण्डलमा पानी वाष्पको संक्षेपण द्वारा गठन हुन्छन्। यो advection बादल बाट चिसो बायाँ वातावरणमा सार्छ र फैलन्छ।
तापमानमा परिवर्तन advection को कारण
Advection सँग समय एकाइहरू द्वारा विभाजित तापमानको एकाईहरू हुन्छन्। यसले थर्मल भिन्नतालाई संकेत गर्दछ जुन एक विन्दुमा अनुभव गर्दछ जुन हावाको आगमनको कारणले भिन्न तापक्रममा हवा बोक्दछ।
यदि, उदाहरणका लागि, जहाँ हामी हावा मापन गर्दैछौं कडा चिसो क्षेत्रबाट आइपुग्छौं, हामी एक चिसोपन अनुभव गर्छौं र तापमान एड्भिक्शन negativeणात्मक संख्या हुन्छ जसले हामीलाई तापमान घट्दै गइरहेको प्रति इकाई कति डिग्री दिन्छ भनेर बताउँछ।
एयर कूलि various विभिन्न कारणका लागि हुन सक्छ:
पृथ्वीको सतह तापक्रम को कारण नि: शुल्क संवाहन सूर्यको किरण द्वारा उत्पादित छ।
भूमिको अभिलेख द्वारा, हावाका सतहहरूको पहाड पार गर्नका कारण, मजबुत संवहन हुन्छ।
हावा दुबै तातो र चिसो मोर्चाको वरिपरि उत्रन बाध्य बनायो, चिसो हावा मासको तेर्सो आन्दोलनको उत्पादन गर्दछ, चिसो एक उवालो हावामा तेर्सो आन्दोलन द्वारा उत्पादन।
जस्तो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, मौसम विज्ञानमा ध्यान दिन एडभ्याक्सन एकदमै महत्त्वपूर्ण कारक हो। यो एकदम कन्डिशनिंग हो जब यो मौसमविज्ञानी पूर्वानुमानको लागि आउँदछ र वातावरणको गतिशीलता र स्थिरतालाई जान्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Advection